u-Wandile Makwetu uzoba ukapteni we-SA U19s e-England
NgoLwesine i-Cricket South Africa (CSA) imemezele ukuthi u-Wandile Makwetu uzoba ukapteni we-Coca-Cola South Africa under-19s uma iqembu liya e-England ngo-July kulonyaka. Kuzoba nama-four-day Youth Test match embili nama Youth One-Day International amathathu kusukela ku-08-29 July.
u-Makwetu unesipiliyoni esiningi eqenjini njengoba adlala kuma-ICC U19 World Cups amabili, ama-Youth One-Day Internationals angu-28 nama-Youth Test match amabili selokhu adlala umdlalo wakhe wokuqala ne-Namibia kwi-2016 U19 World Cup e-Bangladesh.
Lomdlali uyalijabulela ithuba lokuhola iqembu. Uzimisele ukwenza umsebenzi omuhle futhi abheke abadlali abazodlala indima kusasa.
“Kuyindumiso kanye nenhlonipho kimina ukukhethwa njengokapteni wama-SA U19s,” esho ephawula. “Bekuyisifiso sami isikhathi eside futhi ukuthi kwenzeka manje kuletha imizwa emihle kimina. Abadlali abalungile engizothola ithuba lokubahola e-England, iqembu lixutshwe kahle phakathi kwabadlali abangenele i-World Cup onyakeni ozayo nabadlali abaletha isipiliyoni esiningi eqenjini.”
“Iso elilodwa libheke i-World Cup elandelayo, leliqembu linabadlali abangaya kwelandelayo futhi badlale kahle kakhulu.”
Iqembu lakhethwa emuva kwekhempu eyabanjelwa kwimpelasonto edlulile e-CSA Centre of Excellence ePitoli lapho abadlali abangu-27 bamenyelwa ukudlala phambi kwabakhethayo nama-national scouts.
i-Convenor of selectors, u-Victor Mpitsang ukholwa ukuthi bakhetha kahle futhi bathatha abadlali abazokwazi ukubhekana nesimo esinzima sase-England. Unesiqiniseko sokuthi ukulingana kwabadlali abancane nespiliyoni kuzohambelana neqembu njengoba beqala ukwakhela i-2020 World Cup.
“Iqembu eliya e-UK elilungile ngoba sinesipiliyoni sabanye abadlali abaya kwi-World Cup kanye nabadlali abanesipiliyoni abadlala ama-semi-pro games eyodwa noma amabili,” esho. “Khona okukhulu esikubhekile. Kune-World Cup ngo-2020 futhi kunabadlali abambalwa esibanika ithuba lokuthola isipiliyoni ngaphambi kwalokho. Kunelinye ithuba lokuthi abadlali bagcine amagama abo ekhona, sine-tour eya e-India kuqala unyaka ozayo.”
“Kukho konke, siyajabula ngeqembu esilikhethile futhi lizoqhudelana kahle e-UK kwisimo sakhona. Njengabakhethayo, sifisela umqeqeshi u-Lawrence Mahatlane neqembu lakhe konke okuhle futhi sithemba ukuthi kuzoba nemiphumelo emihle.”
u-Van Tonder ungaphambili kwabe-SA abathathu kwi-ICC U19 World Cup Select XI Ama-SA U19s ayiqeda kahle i-World Cup Ukuqhuba okokugcina kuma-SA U19s Ama-SA U19s ahlela indlela ebheke phambili i-Pakistan idlulela kwi-ICC U19 World Cup semi-final i-New Zealand ihlula i-South Africa U19s nokho u-Rolfes ethole ikhulu Ama-SA U19s afuna ukuqhubeka “nezikhathi eziguqula umdlalo” Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup u-Mahatlane uyajabula ngenqubekaphambili yama-U19 ngaphambi kohambo lokuya kwi-World Cup "Ukusebenzisa amakhono” kuzo ukhiye wokunqoba i-final ye-Youth Tri-Series kusho u-Gwavu